Mgbasa ozi na Yelp? | Martech Zone
Mgbasa ozi na Yelp?
N'oge na-adịbeghị anya, anyị na-enyere ọfịs anyị ọfụma (ee - anyị nwere otu!) Kpebie ma ịzụrụ mgbasa ozi na Yelp bụ ezigbo ego maka ịkwalite ya spa ebe a na Indianapolis, Quiescence Ahụmahụ. Monique na-ahụrịrị ụzọ ụkwụ ụkwụ si na ọnụnọ ya na Yelp, yabụ ikekwe mgbasa ozi na Yelp ga-emepụta karịa.
Na isoro onye mgbasa ozi mgbasa ozi na-ekwu okwu, ngwugwu mgbasa ozi siri ike. Nke mbụ, Monique ga-enweta mgbasa ozi raara onwe ya nye na mkpa Yelp maka azụmahịa maka ya. Yelp agaghị akwalite azụmahịa ọzọ - naanị ya - na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ:
Ọzọkwa, mgbasa ozi ahụ ga-agba na ibe azụmahịa nke ndị asọmpi:
N'ikpeazụ, Yelp ga-ejikwa mgbasa ozi ndị a ma ama na ekwentị mkpanaaka:
Onye nnọchi anya Yelp rụrụ nnukwu ọrụ nke ijegharị anyị site na ọnọdụ ha na mbara, na-atụle onwe ha na Egwu Yellow, Onye na-enye ndụmọdụ na njem na Ndepụta Angie (onye ahịa anyị). Iji jiri anya nke uche hụ ya, ha nyere eserese Google Trends a:
Onwe m, echere m na nke a dị aghụghọ. Eserese a na-egosi na ọnụọgụ ọchụchọ n'ezie maka saịtị ahụ n'onwe ha… ọ bụghị ọchụchọ maka okwu dịka azụmaahịa Monique ga-achọ. Ọ bụrụ na ị na-eme na search (“ịhịa aka n'ahụ Indianapolis”), nsonaazụ ọchụchọ dị nnọọ iche - na Ndepụta Angie a na-egosipụta ya n’elu Yelp na Yellow Pages na nsonaazụ azụmaahịa Google na-achị peeji a:
N'ikpeazụ, anyị nwetara ọnụahịa maka mgbasa ozi Yelp. Ọnụ ego adịghị akwụ ụgwọ, ọbụnakwa gụnyere vidiyo ọdịnala nke Yelp gaara ewepụtara ya na onye ahịa ya. Onye nnọchiteanya ahụ gwara anyị na mgbe enwere vidiyo, enwere ntụgharị 7% ka elu. Na esemokwu na ịnye ọnụahịa bụ na ọ chọrọ nkwekọrịta kwa afọ. Ọ bụrụ na Monique anaghị enweta nsonaazụ, ntaramahụhụ maka ịpụ n'oge bụ ọnwa 2 nke ịkwụ ụgwọ na mgbakwunye na vidiyo nke vidiyo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-efu Monique otu puku dollar ma ọ bụrụ na mgbasa ozi anaghị arụ ọrụ.
Anyị kwadoro Monique ọ bụghị gaa n'ihu na mgbasa ozi… ọ bụghị n'ihi na anyị chere na mgbasa ozi Yelp agaghị arụ ọrụ, mana n'ihi ihe achọrọ maka ntinye aka kwa afọ. Otu ụbọchị iri atọ ga-adị mma ịnwale ma ọ bụrụ na ọnụego ntụgharị ga-achụpụ azụmahịa ọhụrụ zuru ezu maka Monique iji mejuo kalenda ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na o meghị ya, nkwekọrịta nkwekọrịta a na-eme kwa afọ nwere ike imebi azụmahịa ọhụrụ ya - mgbe ọ kacha chọọ inweta ego.
Used jirila Mgbasa Ozi Yelp? Gịnị bụ ahụmahụ gị?
Tags: Ndepụta Angienchọta mpagharanyocha ọchụchọ mpagharaMgbasa ozi ọchụchọ mpagharaNyochaYelpyelp nyocha
SpeakPipe: Tinye Ozi olu na weebụsaịtị gị
Ọnụahịa aha dị ka nke ahụ maka mgbasa ozi ga-eme ka azụmaahịa ọhụụ ọ bụla kwalite.
Dec 25, 2017 na 8:29 PM
Emechara m debanye aha maka mgbasa ozi yelp na ha ga-akpọ m ugboro ugboro mgbe m gwachara ha na enweghị m ike ịme ya na enweghị m ọrụ ọ bụla na ọnwa mbụ enwetara m ego 300 + maka ụyọkọ clicks na enwetabeghị ndị ahịa ọ bụla enweghị ndị ahịa nke yelp akpọrọ ka m nweta ọnụego mgbe m kagburu ozi mgbasa ozi ha boro m $ 24 maka ọrụ ọrụ yelp ma ha kwesiri inwe azụmaahịa yelp n'efu bụ ojoro m ga-eme ka oku ọzọ gbanye mgbe m kwere ka enwere onwe mgbe m kwụrụ ụgwọ ọnwa nke mbụ na anaghị m ekwupụta maka azụmaahịa ahụ ka ha ga - ewe ya na akaụntụ m site na ime ka m mara na ha gbara akwụkwọ kaadị m.
Mara ka m na-agba mgba ha gara n'ihu ma mee nke a
Ọ bụrụ na ị ga - eme ka ndị mmadụ banye otu afọ, mgbe ahụ ị ga - enwe obere ntụkwasị obi n’ihe ị na - ere. Agaghị m emetụ nke ahụ were osisi iri.
Jul 5, 2013 na 10:52 PM
Yelp gwara m na ọ dịkarịa ala nkwekọrịta afọ abụọ @ 450 / ọnwa
Aug 27, 2013 na 2:58 PM
Daalụ Jim Hart. Ihe ikwuru dị ezigbo mkpa yana ihe ndị ọzọ na post, o yikarịrị ka m gaghị eji ha kpọsaa. Ha enyochawokwa nyocha sitere n'aka ndị ahịa m kachasị eguzosi ike n'ihe. Abụ m acupuncturist ma amachaghị banyere ihe azụmahịa, yabụ ana m adabere na nyocha iji nyere m aka ịme mkpebi. Gị dị nke ọma. Ọ bụrụ na ha nwere ntụkwasị obi na ihe ha na-enye, ha ga-ahapụ gị ka ị nwalee ya otu ọnwa. Daalụ ọzọ, Tracy Sturdivant
nnukwu post Doug. Elere m Yelp anya nke ọma maka ndị ahịa wee gwa anyị okwu n'ụzọ doro anya banyere okwu a na-eme kwa afọ yana ọnụọgụ ahịa nke ahụ. Echere m na anyị ga-ahụ nhọrọ ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya, ọkachasị site na posts dị ka nke a.
Soro ndu Google gi; ewezuga nri na ihe ọ drinkụ drinkụ Yelp anaghị edebanye aha ọ bụ ezie na Yellow Pages na-aga n'ihu na-agbadata na ngalaba niile. O yiri ka ọ ga-eme ka ọnọdụ Doug dị ike dị ka Yelp na-edebanyeghị aha na ngalaba ahụ ike na nyocha ha na-egosi na Yuppies dị mkpa dị ka ọnụ ọgụgụ ha.
Anụla m ọtụtụ obere azụmaahịa na-eme mkpesa banyere ike ọgụ site na Yelp. Onye na-ere ahịa na-akpọ gị ma nye gị ọkwa ahụ ma ọ bụrụ na ị jụ ịbanye maka mgbasa ozi kwa afọ, ị ga-ahụ ọkwa 5 kpakpando gị apụtaghị na peeji nke ụlọ ha ọzọ. Ha na-edozi ma ọ bụ na ala. Nke a emeela ma ọ dịkarịa ala obere ụlọ ọrụ 6 (na-abụkarị mmadụ 1-3) n'ime ọnwa 6 gara aga. Enyochakwara m peeji ole na ole (otu ebe m dere ma enweghị ike ịchọta nyocha nke kpakpando m 5) na ihe dị ka ọ bụ isi na ihu ahụ.
Jul 5, 2013 na 10:50 PM
N'eziokwu, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha mere m.
T maka 2
Jul 11, 2013 na 6:58 PM
Ekpebiri m ịbanye maka ọnwa 6 na ego ịkwụsị ọnwa 1. Eziokwu na agbakwunye wetara naanị ajụjụ abụọ n'ime ọnwa 3. Ha na-ekwu na enwere mmetụta snowball na mgbasa ozi ị na-ahụ nsonaazụ ndị ọzọ na oge. Nke na - eme ka m chee na a ga - enwerịrị matrik na - egosi mgbasa ozi gị n'oge dị mma karịa mgbe ị nọrọ ebe ahụ karịa. Echere m na m ga-eri ego igbu ego ma tinye ego m fọdụrụ na ahịa. Ha edeziela ụfọdụ n'ime nyocha m kachasị mkpa! Ngwanụ.
Darleen Barnard kwuru
Ọkt 11, 2013 na 9:37 PM
Obi dị m ezigbo ụtọ na achọtara m edemede a. Ana m enyocha mgbasa ozi na Yelp mana m na-ala azụ ịbanye maka afọ 1. Enyere m nhọrọ ọnwa 6 na ego ọnwa 1, mana a na-ewepụ nhọrọ vidiyo. Yelp nwere nhọrọ PPC ọzọ nke na-achọghị nkwekọrịta nke m na-adabere n'akụkụ. Agbanyeghị, a gwara m ma m soro PPC gaa, enweghị m ike ịdebanye aha maka mgbasa ozi ahụ n'okporo ụzọ. Yiri ka odi m ..
Nnukwu ego furu efu maka azụmahịa m. Ana m enweta 10 ugboro ole ka m na Yelp peeji organically na for free mgbe clicks eme site na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi.
Tavin Eisenhauer kwuru
Ọkt 22, 2013 na 7:40 PM
Mụ na Yelp Rep kwurịtara n'ụtụtụ a. Enwere m ụbọchị ụbọchị na Portland OR ma abụ m nwanyị na-egosi. Echere m na Yelp ụgwọ ndị astronomical na-achọ nke a otu afọ nkwekọrịta crazy. Ọ bụ ezie na m ga-achọ iji Yelp kpọsaa, achọghị m ịkwụ $ 350 / mo. Ọnụahịa na nkwekọrịta dị iche iche nke onye ọ bụla edebugo ebe a ziri ezi. Otu ihe ọzọ m jụrụ banyere ya bụ vidiyo ahụ. N'agbanyeghị na ha kwuru na ha na-akwụ ụgwọ maka vidiyo (nke ziri ezi, anyị maara n'ezie na anyị na-akwụ ụgwọ ya). Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji vidiyo ahụ na weebụsaịtị azụmaahịa gị, ị ga-azụta vidiyo ahụ n'aka onye na-ese foto. Yabụ agbanyeghị na anyị na-akwụ ụgwọ ya, ọ bụghị nke anyị ka anyị ga-eji.
Enwere nhọrọ ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa, Mana, ọ bụ $ 200 / kwa ọnwa. ma ejighi m n'aka na inwere ike itinye okpu na ya.
O doro anya na ha na-ekwu na ebe ọ bụ na ị nọ n'elu, azụmahịa niile na-abịa n'ụzọ gị, na-ekwe nkwa. Ee… mba. Ọ bụrụ n'ezie na ha chere na, mgbe ahụ ọ gaghị adị mkpa maka nkwekọrịta kwa afọ. Ọ ga-akara m mma ịkwụ ụgwọ iche maka vidiyo ma setịpụ ego nke m kwa ọnwa mgbe ahụ (ọ bụrụ na ị ga-enwe nkwekọrịta) ọnwa 3, ọnwa 6, nkwekọrịta 1 afọ na ezi ego dị obere
Ndo, enweghị mgbasa ozi Yelp maka m, maka ugbu a.
Ọkt 23, 2013 na 6:54 PM
Ana m arụ ọrụ na azụmaahịa na-enweta ma ọ dịkarịa ala ndị ahịa ọhụrụ 8 kwa ọnwa naanị site na yelp. Ihe niile dabere!
Mana olee otu ị ga - esi jide n'aka na ndị ahịa ọhụrụ 8 na - abịa site na mgbasa ozi akwụ ụgwọ na ndepụta Yelp efu ha? Have maghị maka na ị nweghị ike ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ntụgharị na mgbasa ozi akwụ ụgwọ na ndepụta anaghị akwụ ụgwọ.
Yelp dị ka mafia. Abụghị m onye nwe azụmaahịa na-amaghị ụgha nke na-amaghị CPC site na mgbasa ozi sitere na echiche. Okwu mbu nke ndụmọdụ m: Emela n'ọnọdụ ọ bụla iji Yelp kpọsaa. Ha bụ ndị ohi (yiri nke ekwensu n'ezie) ndị chọrọ ka ị banye akara akara ahụ ka ha wee nwee ike ijide gị na nkwekọrịta ha wee gaa n'ihu inye gị ọrụ dị egwu. Emeela m mkpesa na mgbasa ozi mgbasa ozi Yelp na mgbasa ozi ha na-ehichapụ ihe karịrị otu oge. Nzaghachi m natara abụwo otu oge ọbụla. Onye na-ere ahịa Yelp na-ata ahụhụ zitere m ụfọdụ stats banyere otu ihu akwụkwọ m si enweta X ọnụ ọgụgụ, echiche x ndị mmadụ na-abanye na weebụsaịtị m site na ibe yelp, nọmba ọnụ ọgụgụ ekwentị, na ọnụ ọgụgụ X nke azụmahịa Yelp rere. Ha anaghị ekwupụta na stats ndị a niile nwere obere ihe na mgbasa ozi Yelp akwụ ụgwọ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe a bụ nsonaazụ ndepụta m Yelp n'efu. Ihu ọma na nkenke, ọ bụrụ na m nwere 300 n'efu kwa ọnwa Yelp echiche na weebụsaịtị m (Dabere na ọnụọgụ ọnụọgụ google tupu mgbasa ozi na Yelp) wee nweta 40 pịa gafee (buru n'uche na ndị a bụ pịa na peeji nke Yelp m, na-enweghị na-ekwe nkwa na onye ahịa nwere ike ịkpọ m ma ọ bụ nye iwu), gịnị kpatara ahịa Yelp ji atụgharị stats ndị ahụ dịka a ga - asị na m na - enweta ndị ahụ n'ihi mgbasa ozi akwụ ụgwọ m? Maka na ọtụtụ ndị ahịa ha bụ ndị ahịa azụmaahịa obere na-anaghị ekwupụta mgbasa ozi ma ha na-anwa ịmegharị ha ka ha kwenye na n'enyeghị mgbasa ozi Yelp na-akwụ ụgwọ ihe a niile ga-apụ.
Ndị a bụ ezigbo ojoro omenka. Ee, Yelp bụ ezigbo isi mmalite azụmaahịa ọhụrụ bụ nke mere m jiri debanye aha maka mgbasa ozi akwụ ụgwọ na mbu. Agbanyeghị, isi okwu bụ na ngwugwu mgbasa ozi ha bụ mkpochapụ nke na-erite uru naanị Yelp, ọ bụghị ndị mgbasa ozi. Ị maara? Ndị ahịa Yelp agaghị enye gị nọmba ekwentị ha iru ha? Have nweghị ụzọ isi kpọọ ha. Ha nwere ike ịkpọ gị naanị. You nwere ike izipu ha ozi, mana ha agaghị azaghachi maka ụbọchị. Mgbe ha mechara kpọọ, i chefuo oku a ị maara na ị na-agba obere azụmaahịa, ị nweghị ụzọ isi kpọghachi ha. Nke a nwere ike ịga n’ihu. O doro anya na ndị ahịa a na-arụsi ọrụ ike na ha enweghị oge iji soro ndị na-akwado ọrụ ha, ndị ahịa ha.
Ozugbo nkwekọrịta mgbasa ozi m kwụsịrị, ọ nweghị ụzọ m ga-esi debanye aha na ha ọzọ. Total ojoro. Jikọọ na ndepụta Yelp n'efu. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma karịa mgbasa ozi akwụ ụgwọ na n'efu.
Ọ dị mma. Yelp no bueno. Kedu ihe ị kwadoro?
Aga m akwado ị nwere ihuakwụkwọ na Yelp, Facebook na Google +… mana echeghị na m ga-akpọsaa na Yelp nyere ha ihe ha chọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eweta ọrụ na Ndepụta Angie, ha nwere ndị na-ege ntị kachasị baa uru n’ebe ahụ yana ụzọ dị mma iji kpezie ndị na-enye ọrụ na ndị ahịa.
Mee 3, 2014 na 9: 42 PM
You na-echekarị iji Yelp nweta ndị ahịa ọhụrụ ma ọ bụ naanị mee ka ọ dịkwuoro ndị ahịa gị dị ugbu a ịnweta gị? Dịka onye ọrụ Yelp, m na-eji Yelp maka ọhụụ ọhụụ yana yana na-achọ menu na akara ekwentị maka azụmaahịa m maraworị ma gaa. Agbanyeghị, ekwesịrị m ịsị na anaghị m pịa mgbasa ozi ma mgbe m hụrụ mgbasa ozi, echere m na ọ bụrụ na ị ga-akpọsaa na Yelp mgbe ahụ ngwaahịa gị agaghị adị mma.
Nov 19, 2014 na 2:36 PM
Amaghị m na nke ahụ ga-ekwe omume!
Dec 28, 2014 na 9:09 PM
O di nwute, nwunye m na-agba oso maka ahia ntutu isi ya. Yelp kwuru na enwere akara 100 na mgbasa ozi ya na izu abụọ mbụ. Anyi ekwughi uzo, nwunye m nwere ekwe nti, ahia ma obughi otu oku! O nwere 5 kpakpando Yelp saịtị nwere nyocha uku di uku ka o gha esi nweta oku efu site na ndi mmadu ndi nwere mmasi iji pinye aka na mgbasa ozi ya?
Ihe na-esi ike bụ na Yelp boro anyị $ 3.50 kwa pịa!,
Anyị atụghị anya inweta karịa ịpịrị aka ole na ole (anyị chere na ọnụọgụ pịa bụ Wayo) yana ezigbo pasent (10-30%) nke ndị kpaliri ịkpọ.
Enweghị oku agaghị abụ nnukwu nsogbu ma tụọkwa anya, mana ọ bụghị mgbe Yelp chọrọ ịgba anyị ụgwọ maka clicks 100.
Ndị otu nkwado Yelp tụrụ aro ka anyị mee ụfọdụ ndozi na peeji Yelp na nkọwapụta azụmaahịa. Nke ahụ emeghị ihe ọ bụla iji kọwaa ọnụego oku 0% site na isi okwu 100+.
Anyị chọrọ si Yelp ugbu a, ha na-agwa anyị na anyị akagbuola site na nke 15 nke ọnwa gara aga.
Ndụmọdụ ọ bụla gbasara otu esi achụpụ anyị yana otu anyị nwere ike isi zigara ndị ọzọ nwere obere azụmaahịa ahụ okwu iji zere Yelp dị ka ihe otiti ahụ.
Feb 18, 2015 n’elekere 9:42 nke abali
Ọ bụrụ na ha nwere gị ịlele akaụntụ ozi na-eme ka akpaka withdrawals… .M ga-kagbuo na akaụntụ ma meghee ọhụrụ. Mgbe ha yiri gị egwu na iwu… debe ihe akaebe banyere ndekọ ekwentị gị iji gosi aghụghọ. Nke ahụ bụ ihe m ga-eme. O doro anya na ị nwere ike ịda n'ụlọ ikpe… .ma ọ bụ naanị kagbuo ma kwụọ ụgwọ ahụ. Akpọrọ m Yelp asị. Anyị ndị nwe ụlọ ahịa kwesịrị ịlụ ọgụ.
Alfredo Ruano kwuru
Sep 21, 2015 na 1:00 PM
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri na ebu na anyị na Yelp na-akpọsa. Ọ bụghị ezigbo nsonaazụ na nkwekọrịta afọ 1. N'elu nke ahụ, ha ewepụla ụfọdụ ezigbo nyocha anyị na ihe ngọpụ karịa na ha nwere ike ịbụ nke adịgboroja. Akwadola gị ka gị na ha mefue ego gị.
Nov 2, 2015 na 11:15 AM
Nke a bụ nnukwu ozi. Enwere m otu nsogbu ahụ na akwụkwọ ihu. Ha leghaara ya anya kpamkpam.
Feb 4, 2016 na 12:13 PM
Mụ onwe m nwekwara obere azụmahịa, enwere m akara kpakpando ise, ọ bụ onye ahịa m rụrụ ọrụ maka ya, ma ọ maghị m ma ọ bụ nwee ụdị njikọ ọ bụla nke m ga-eme ka echiche ya gbanwee, nke ga-eme ka ọ nye gbanwee echiche.
O were ya n’onwe ya inye m nlele nke ọma. O kwuru kpọmkwem ihe mere o ji chee na ọ maara ọrụ nke ọrụ. Enweghị ihe ọ bụla na nyocha ahụ ọ ga - egosi na ọ bụ ihe ọ bụla mana echiche na - enweghị atụ.
Mgbe yelp ahịa gbalịrị ire m na mmemme akwụ ụgwọ, ejiri m nwayọ jụ ọtụtụ oge n'ọtụtụ oku na-akpọ.
Mgbe kpachara anya kpakpando m ise furu efu. Ọ bụ ugbu a na-atụ aro na ngalaba. Ọ bụ naanị m nyochaa. M kpọtụrụ yelp ma kwupụta ikpe m na okwu ahụ "anaghị atụ aro" na-eduhie ma ozugbo onye ahịa nwere ike ịhụ okwu ahụ "atụghị aro" ha ga-ekwenye na ọ bụ nyocha na-adịghị mma na azụmaahịa ahụ akwadoghị ma gaa n'ihu.
Mgbe m kwuchara ikpe m, echeghị m na ihe ọ bụla ga-eme, enwere m obi ụtọ ịhụ na ha weghachite nyocha akara kpakpando ise.
N'oge na-adịghị anya mgbe ha nwara iresị m usoro mmemme akwụ ụgwọ ọzọ, m jụrụ ọzọ. Chezienụ ihe, agbaghala akara kpakpando m ise ọzọ.
N'oge a, m ga - ajụ ndị ahịa ka ha nyochaa m. Seemedfọdụ yiri ka hà nwere obi ike na ha ga-ewepụta oge iji nyochaa. Ọ dịghị nyocha ndị ọzọ gosipụtara na ibe m ọzọ. Emechara m chọpụta na nyocha ndị ahụ anaghị abanye na peeji ahụ. Yabụ ugbu a anaghị m ekwupụta ndị ahịa.
igwe foto igwe
Oo n'ezie? Enwere m ụfọdụ oku nrụgide dị elu site na ha ụnyaahụ. Ha na-akpọ m ugboro ugboro ruo mgbe m kwetara na ọnwa 3 na okpu nke $ 325 - Ana m echegbu onwe m ihe m nwere ike debanyere aha ugbu a.
Nkịtị Solid Web Dev
Anọ m na-eche banyere mgbasa ozi na ha, mana onye nnọchi anya ha na-akpọ m kwa ụbọchị maka ọnwa ndị m hụrụ na-adịghị mma na ụzọ m na-akwagide.
Onye nwe iwe
O mekwara m!
Emela, dịka ndị ọzọ kwuru, jiri Yelp kpọsaa!
Ha na-ekwu ihe ọ bụla iji mee ka ị debanye aha na mgbe ahụ ị nweghị azịza ọ bụla!
Ha na-egbochi gị ịme mgbanwe na ndepụta nke onwe gị na Yelp!
Ha gbara ụgwọ na akaụntụ m na-enweghị ikike mgbe ha mesiri m obi ọtụtụ ugboro na ha agaghị!
Enwetara m ọtụtụ oku site na ndị ahịa ndị kwuru na ha hụrụ na m na-akpọsa na Yelp ma chọọ ịhụ ma m ga-anwale mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ha, ma ọ bụ jiri ụlọ ọrụ ha maka SEO ..
nke a gosipụtara na Yelp anaghị enyocha clic ma jide n'aka na naanị m na-akwụ ụgwọ maka ndị na-achọ ma nwee mmasị iji ọrụ m dịka ha kwuru! !!
Total ụlọ ọrụ b / s!
Agaghị m akwado mgbasa ozi m tupu ha ebipụta ya
ha nwere eserese eserese na ya kama akara m
ọ dịghị mgbe ha zitere m ụgwọ iji kwụọ ụgwọ n'ime ụbọchị 30, na-akwụ ụgwọ ụlọ akụ m ụbọchị 1 !!!!
(ihe niile ha ghaara ụgha)
.. Agwara m onye njikwa, ọ sịrị "kpamkpam, anyị ga-eme mgbanwe ndị a na akaụntụ gị" (ihe 5 na-ezighi ezi, gụnyere mpaghara ọrụ m) "anyị chọrọ ka ị nwee obi ụtọ na ọrụ ị na-enweta. ”
..n'oge m jụrụ ya mgbanwe ndị ọ ga - eme (tupu ọ pụọ na ekwentị, chọrọ ijide n'aka na ọ ghọtara) Ọ nweghị ike ịkpọ aha otu ihe anyị tụlere!
ọ naghịdị ege ntị! Echere m na anụla m ka ọ na-ekwu okwu n'azụ (ihe kpatara m gwara ya ka o kwughachi m ihe)
Gbaa ọsọ! Nwoke a bụ “Onye nzuzu Visor”
ọ bụ onye ahụ na-azụ ndị a ojoro Artist Mmụọ Ọjọọ!
Adịghị agbasa ozi na ụlọ ọrụ a!
Ha gbara m $ 375 na m natara naanị 16 oku oku banyere m website, ọ bụghị otu oku na-aga site na otu nwere ike ahịa! a naghịkwa asọmpi ndị asọmpi ma eleghị anya na ịpị mgbasa ozi gị!
Enweela m ugbu a niile nyocha ihu kpakpando ise m wepụrụ TANKEL YELP!
Daalụ maka aro ndị a - Anọ m na-atụle maka mkpọsa a na-akwụ ụgwọ. Ogologo oge ole ka ị kwụrụ maka mgbasa ozi ahụ? Enwere m ike ịjụ, ego ole ka itinye ego na ya?
Azụmaahịa anyị nwekwara nyocha dịgasị iche iche gụnyere otu elele ise na ise. O doro anya na ọ bụ onye na-adịghị mma na-agbagha ma na-agabeghị ahịa anyị n'ezie, ọ bụ ndị ahịa n'ezie ka ọ dị.
M ji nkwanye ùgwù jụ ịkpọ oku mgbasa ozi (ọtụtụ n'ime izu ole na ole), na nyocha anọ na ise na-ezo, na-ahapụ naanị otu nyocha kpakpando ahụ. Ha na-ekwu na ha na-ewepụ nyocha ndị na-abụghị ndị iwu na-akwadoghị, agbanyeghị na onye nyocha na-enyocha otu kpakpando naanị otu nyocha ahụ, ebe otu n'ime mmadụ ise sitere na onye nyocha na ọtụtụ nyocha na profaịlụ ha.
Ha bụ ndị ụgha na ndị ohi na yelp. Agaghị m akwụ ha otu narị, ma ghara iji ha dị ka onye na-azụ ahịa iji chọọ ụlọ ahịa ndị dị na mpaghara. M na-eji ikike onye na-azụ m eme ihe - biko ejirila saịtị ahụ mee ihe! Ka ndị mmadụ na-ezere ileta ya, ha ga-enwe obere echiche, na-atụ anya na ha ga-apụ ahịa.
N'ihi ya, m lere anya na ya ma otu kpakpando dị adị. Nke ahụ dị mma, anyị nọ na ụlọ ọrụ ebe otu kpakpando bụ ụkpụrụ. ọ bụ ezie na otu nyocha nke kpakpando dị mma, ọ ka dị ịtụnanya na ị na-ahọrọ naanị nke ahụ ka ọ debe, ebe ị na-atụfu nyocha dị elu mgbe anyị kwusịrị "mba" na mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Yelp yuck.
Ahụmahụ a na-ekweghị ekwe na yelp mgbasa ozi, echeghị na ụdị nnukwu ihe a ga-abụ aghụghọ. Ha na-ekpochi gị n'ime nkwekọrịta otu afọ, dị ka ọtụtụ akọwapụtara ebe a, chefuo maka otu mgbasa ozi si eme ma ọ bụ na-agbaso ozugbo ha batara gị.
Shazọ aghụghọ dị ezigbo mma, nkwa ụgha, ọ dịghị ihe ọzọ karịa aghụghọ!
Teknụzụ PPC ha dịkwa oke ajuju, nwetara oku maka ọrụ na-enweghị njikọ yana ọnụọgụ ha nwere ezughi oke.
Mgbe a jụrụ ha ihe kpatara oku na-ejikọtaghị na azụmaahịa ahụ, ha na-ekwu na azụmaahịa dị n'ụdị ụfọdụ na onye ọbịa nke dabara na ụdị ahụ ga-ahụ mgbasa ozi ahụ, nke na-egosi na ha chọrọ ịpị aka na ilekọta na-egosi mgbasa ozi ndị ahịa na-achọ ọrụ gị.
Ezigbo aghụghọ, adala n'ọnyà, pụọ!
Mee 11, 2016 na 3: 17 PM
Kwere, mee m otu ihe ahụ, were kpakpando ise m niile n'ihi na achọghị m ịbanye na ha, gịnị ka anyị kwesịrị ime? Nke a bụ wayo.
Mee 25, 2016 na 2: 26 AM
Ọnụ ego niile m na-atụ aro na onye ọ bụla tinyere okwu ahụ na ndị a amaghị ihe ha na-eme tinyere m chere na ha nwere ndị ọrụ pịa mgbasa ozi iji jiri dollar mgbasa ozi. Ndepụta Craigs nwetara m oge 100 nzaghachi maka Ego ole? Chere ya? Or. Maka ihe ọ bụla na-akpata Craigs Ndepụta mgbasa ozi bụ n'efu. Ndị a bụ ndị ohi doro anya ma dị mfe.
Mee 29, 2016 na 1: 01 AM
Enweela m ahụmahụ dị egwu na mgbasa ozi yelp. Ha dị oke ọnụ. Are na-ekpochi n'ime nkwekọrịta ị ga-akwụ ụgwọ dị ukwuu iji kwụsị n'oge. Enwetaghị m ezigbo nsonaazụ mgbasa ozi a. Biko emekwala otu ihe ahụ m mehiere. Na-emefu gị mgbasa ozi dollars n'ebe ndị ọzọ.
M n'ezie gara maka nke a. Na-egbu mgbu na-egbu mgbu…. na abum onye oru PR / Aru ahia. M mma ikwughachi echiche Elaine. The "click per ad" rate is a bit ambiguous at best - with the sales rep agwa m na ọ ga-abụ Olee ihe enyemaka $ 5 - $ 10 dabere n'elu asọmpi (ọzọ peeps w / otu biz draịva ya) mgbe ọ bụ n'ezie ihe $ 18 / pịa . N'ime ọnwa 3 e nweghi onye tụgharịrị. Ihe algọridim ha chọrọ ezigbo tweaking - Yelp ga-enyefe mgbasa ozi anyị mgbe ndị folks na-eme nyocha maka ọrụ ndị na-enweghị njikọ. Sịkwa ihe mere ya ara ara…. onye chọrọ mgbasa ozi maka ikwu “ebe a na-eme bred” mgbe ha nyochara “mmanya”.
Ọ bụrụ na m nwere ike nweta ya ọnụ m nwere ike n'ezie kpọpụ maka aghụghọ…. ọ dị njọ.
M debara aha maka yelp na naanị nhọrọ ha nyere m bụ nkwekọrịta 1 afọ. Mgbe ọnwa isii gasịrị, ike gwụrụ m ịkwụ ụgwọ $ 6 kwa ọnwa n'agbanyeghị na anaghị m enweta ndị ahịa ọhụụ n'aka ha. N'ihi ya, m na-anwa ịkagbu maka otu ọnwa. Ha kwuru na m ga-enyerịrị ọkwa ụbọchị 375 ma kwụọ ụgwọ $ 30 n'isi nkwụsị. Onwere onye maara ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m jụ ịkwụ ụgwọ?
Jun 30, 2016 na 3:30 AM
Abụ m onye nwe ụlọ ahịa. Emechara m kagbuo nkwekọrịta m na yelp. Ọbụghị naanị na ọ bụ arụmọrụ dara ogbenye maka ego anyị kwụrụ, mana ha karịrị ike onye na-azụ ahịa. Onye na-azụ ahịa na-anọgide na-enweghị aha, na-ede nyocha na-adịghị mma banyere azụmahịa gị, na-enweghị ihe akaebe. Nke ahụ na-eme ka ndị asọmpi gị dee aha ọjọọ / nyocha na-enweghị aha, wee mebie aha azụmaahịa gị. Yelp chọrọ ka m kwụọ $ 540 kwa ọnwa maka nke ahụ?! Enwere m onye ahịa nyere anyị nyocha nke kpakpando 1, naanị n'ihi na edekọtara anyị, enweghịkwa teknụzụ maka ya n'oge ahụ (10: 30pm). Anyị arụghị ọrụ ọ bụla maka ha, anyị nwere nkwanye ugwu, anyị na-aga n'ihu ma na-eme ihe n'eziokwu. Ma nwetara nyocha nke 1 kpakpando n'ihi na anyị ji ọrụ n'aka! Yelp jụrụ iwepụ ya.
Jul 5, 2016 na 8: 22 AM
Nwere ike ijiri onwe gị ozi mgbasa ozi na Yelp n'elu usoro ihe omume ọ bụla masịrị gị. Ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ịdekọ nkwekọrịta na Yelp na ntinye ego kwa afọ na-abanye.
Banye na Biz.yelp.com dị ka onye nwe azụmaahịa ma ị nwere ike ịgbanye mgbasa ozi maka ego ma ọ bụ oge ọ bụla. Don't nwetaghị vidiyo ahụ mana ịnwere ike ịnwale mgbasa ozi. Anyị na-eji ha maka ndị ahịa.
Jul 25, 2016 na 9: 20 AM
Michelle - Daalụ maka ikenye. You na-enwe ike inye m ihe omimi na nghọta / nghọta nke onwe gị na mgbasa ozi gbasara “ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ”?
Malcolm Ruthven Nwachukwu
Sep 27, 2016 na 2:29 PM
Megide mkpebi m ka mma, M debanyere aha na Yelp maka mkpọsa mgbasa ozi iji rụọ ọrụ maka opekata mpe ọnwa atọ, max ad na-efu $ 1,000 kwa ọnwa, yana $ 700 mbupụ ego mbido. Azụmaahịa m bụ iwu enweghi ego. Abụ m ọkàiwu na-enweghị ego / ọka iwu, anaghị eme ụdị iwu ọzọ, Yelp makwa nke ahụ. N'oge na-adịghị anya mgbe achọpụtara m na ha na-agbasa mgbasa ozi m (nke m na-akwụ ụgwọ maka pịa) maka ọchụchọ maka "iwu onye nwe ụlọ" na "akara nyocha mkpịsị aka ndụ". Anaghị m eme ihe a!
N'ihi ọrụ mgbasa ozi ahụ adịghị mma, m gwara Yelp ma kagbuo ọrụ ahụ. Ha gara n'ihu ma kwụọ m ụgwọ maka clic c maka ọnwa abụọ fọdụrụ ($ 575 na $ 1,000) yana kwa $ 700 kagbuo ego.
Mụ na ụlọ ọrụ kaadị akwụmụgwọ m rụrụ ụka maka ebubo atọ a. Ejirila # 1 ụgwọ ($ 575) maka enyemaka m. # 2 ụgwọ ($ 1,000) ka na-aga n'ihu. # 3 ụgwọ (ego nkwụsị $ 700) kpebiri na Yelp n'ihi na "ọ dị na nkwekọrịta ahụ"! M ga-ewepụta oge na nsogbu iji gbaa ha akwụkwọ maka ya? Obi abụọ.
Ọkt 25, 2016 na 8:40 PM
Yelp bụ ụlọ ọrụ ka njọ m rụtụrụla. Pịa ọ bụla pịa pịa zuru ezu. Achọpụtara m na ha dị aghụghọ ma m ga-arụ ọrụ iji chọpụta banyere ụgwọ nkwụsị. Enwere m ekele na m nwere nkwekọrịta ọnwa atọ. Mụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị na-arụ ọrụ ma ha ezughị oke, mana Yelp bụ naanị nke m na-atụkwasịghị obi.
Nov 3, 2016 na 12:31 AM
Enwere m nwoke na-arụ ọrụ ụlọ m (nwoke), ndị Yelp rep dị ezigbo mma ma na-anọgidesi ike na-achọ ime ka m debanye aha. Agwara m ya oge ọ bụla anyị kwuru ihe m na-achọ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chọọ "nrụzi ọkụ na obodo" M na-ahụ na yelp na-ekwu "Ndozi ọkụ ọkụ gas kachasị mma na Renton, WA - Yelp" na ọ bụ mgbe niile na peeji mbụ. Agwara m ha Ọ bụrụ na m kwụọ gị ụgwọ, m ga-edebe na ibe mbụ ozugbo ha pịa saịtị Yelp, a gwara m na m ga-eme ya. Mee nyocha n'abalị ụnyaahụ, pịa na Yelp, mgbe m ruru na peeji nke 9 ebe m nọ, 80+ azụmaahịa mechara, abịara m ọbụna mgbe otu nwoke na Biz ya kpọrọ Honey-do Handyman, ejiri m n'aka na ọ bụ nnukwu mmadụ mana n'ezie? M ọkachamara na ekwú ọkụ mmezi na handyman gbagwojuru m na ya pụta? Akpọrọ m ka m kagbuo ma nweta otu akụkọ ahụ dịka ndị ọzọ m gụrụ na saịtị a, ọ ga-adị m ka m gụọ ya tupu. Naanị m mere kagbuo kaadị akwụmụgwọ m ka m nwee ike izere ọnwa BS 2 nke a na-ekwutụbeghị mgbe m debanyere aha, m wee sị na m ga-enye ya ọnwa ole na ole wee hụ ma m chọrọ ịga n'ihu. Enweghị ụzọ m gaara esi debanye aha na nkwekọrịta, enweghị ike ịme ka nke ahụ doo anya na ndị na-ere ahịa. Amaara m nke ọma ma rere m agbanyeghị. Ọzọkwa echefuru m ịtụkwasị obi m obi, hapụ ya, ụlọ ọrụ na-eme ọfụma "na-abụghị biast" (sp) na-arịọ maka ụlọ ọrụ tinye dollar, HELLO !!!!!!!! Ọjọọ m …….
Dec 29, 2016 na 2:00 PM
Obi dị m ụtọ ịhụ mkparịta ụka a, ọ dị m ka ya bụrụ na m lere ya anya tupu ịbanye na mmemme Yelp Ad. Anyị kwenyere na nke a bụ aghụghọ zuru ezu. Mgbe ọnwa nke mbụ gasịrị e nyere m nchịkọta ha na ụgwọ ahụ gosipụtara ọtụtụ oku ekwentị m maara na anyị enwetabeghị: Eji m nlezianya nyochaa ndekọ aha ID anyị na 75% nke oku ha kwuru na anyị nwetara emeghị (ụbọchị / oge / ekwentị ọnụ ọgụgụ edeghị aha) na ọtụtụ ndị kwuru na enweghị azịza, ọ gaghị ekwe omume. ANY see hụrụ nnukwu mgbago na oku ịrịọ arịrịọ ma ọtụtụ n'ime ndị a dabara na ndekọ oku anyị. Maka nke a, anyị ekwenyeghị na ọnụọgụ ha n'ọtụtụ narị clicks anyị chere na anyị nwetara site na ndepụta mgbasa ozi. Anyị nwere oku efu site na ndị mmadụ na-asị na ha hụrụ Yelp Ad na iwu ndị ahịa ZERO. N'ihi iwu ha kagburu, anyị kwụsịrị ịgba ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 1400 ka anyị wee pụọ na ojoro ahụ. Simplezọ kachasị mfe iji lelee nke a bụ na ha enweghị ike inye ihe akaebe ọ bụla nke clicks ha na-ekwu na ha na-eweta maka azụmaahịa gị, nke bụ ihe ha na-akwụ ụgwọ ịgba ụgwọ. Kpachara anya, kpachara anya, kpachara anya, anyị agaghị akwado Yelp Ads rip-off to anyone.
Jenụwarị 25, 2017 na 12:35 PM
Ngwaahịa mgbasa ozi kacha njọ! Emefu ihe karịrị $ 2000 ma ọ bụghị otu ụzọ. Mgbe ahụ kagbuo na e boro $ 700. Agaghị akwado onye ọ bụla, oge obula. Ripoff zuru ezu !! Gwara m ka m gwa mmadụ banyere ya ma weghachite oku m ma ọ bụ email.
Ewela iwe, nweta.
Ihe mbu nke adọta azụmaahịa na YELP abụghị mgbasa ozi. Ọ bụ nyocha.
Ọ bụ ya mere anyị ji mepụta nkwalite nyocha “Y” - nke na - eme ka ọ daa ọnwu maka ndị mmadụ ịhapụ gị nyocha. - Ihe niile maka obere ego nke otu ọnwa nke mgbasa ozi, nweta nyocha nke otu afọ. Mgbakwunye nyocha na-arapara ruo mgbe ebighị ebi. Kpọtụrụ 5StarMarketingSoftware maka ụzọ ka mma iji wuo azụmahịa na Yelp.
M debanyere aha maka nnwale n'efu na yelp, kagbuo mgbe otu izu gasịrị ebe m na-enwetaghị nduzi ndị ruru eru, ha boro kaadị m $ 450 2 ọnwa mgbe ọ gasịrị, na-ekwu na anaghị m akagbu. Ha kwuru na m gaara anata ozi ịkagbu n'aka ha ma ọ bụrụ na m kagbuo, nke ọzọ ebe ọ bụ na anaghị m bụ esemokwu na sistemụ ha. Agwara m ngalaba ngalaba ịgba ụgwọ ha, onye kwuru na ha agaghị akwụghachite akaụntụ m, ha nwere ike ịkagbu ya taa. Akpọrọ m ụlọ ọrụ kaadị debit m ozugbo wee gwa ha ka ha gbaghaa ebubo ahụ. Mgbe m kpọghachiri ka anyị gwa onye njikwa okwu, ha anaghị aza n'ihi na ha kwuru na ọ bụ ụbọchị mbụ n'ọnwa ma nsogbu ịgba ụgwọ karịrị ha. M nwere ike iche! Enwetabeghị m akwụkwọ ọnụahịa, email ma ọ bụ ọkwa na m ga-akwụ ụgwọ n'oge a, ha na-agbazi kaadị m. Google na Facebook na-ezitere gị mmelite mgbe ị na-akpọsa. Yelp dị ka ọ naghị eme nke ọma, nke a bụ mbọ dara ada n'ịchịkọta ego na ndị ahịa. Enweghị obi ụtọ na enweghị idozi ọnọdụ ahụ, ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa ha. Adịghị abanye na maka n'efu enyemaka! O BU EGO